Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay ee New York ayaa ku soo duulay iyadoo ay madaxda adduunku daawanayeen: "Ha dooran dabar go'!
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Safarka Dalxiiska » Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay ee New York ayaa ku soo duulay iyadoo ay madaxda adduunku daawanayaan: “Ha dooran dabargoyn! waa maxay cudur daarkaagu?
Safarka Dalxiiska • Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Wakhtiga waarta • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay ee New York ayaa ku soo duulay iyadoo ay madaxda adduunku daawanayaan: “Ha dooran dabargoyn! waa maxay cudur daarkaagu?
Aïssa Maïga oo u duubaysa cod-baahiyaha kombuyuutarka noole dinosaur ah oo ku soo bandhigaya filim gaaban oo cusub oo loogu talagalay Barnaamijka Horumarinta Qaramada Midoobay ee Ha dooran Ololaha baabi'inta si kor loogu qaado wacyiga ku saabsan isbedelka cimilada. Sawirka: Simon Guillemin
Isagoo gudaha u galay hoolka caanka ah ee Golaha Guud, oo caan ku ah khudbado taariikhi ah oo ay jeediyaan hoggaamiyeyaasha adduunka oo dhan, Dinosaur-ka soo rogan ayaa u sheegay dhagaystayaasha diblumaasiyiinta iyo marti-sharafta oo yaaban oo jahawareersan in " la joogo waqtigii dadku ay joojin lahaayeen cudur-daarrada oo ay bilaabeen inay isbeddel sameeyaan" si wax looga qabto dhibaatada cimilada.
Filimkii ugu horeeyay ee abid lagu sameeyo gudaha golaha guud ee Qaramada Midoobay.
Barnaamijka Horumarinta ee Qaramada Midoobay (UNDP) waxay xarunta Qaramada Midoobay u keenaysaa dinosaur aad u xun, si ay ugu booriso tallaabo cimilo oo dheeri ah oo ka timaada hoggaamiyeyaasha caalamka.
Filim kooban oo maanta la soo bandhigay oo xudunta u ah ololaha cusub ee wakaaladu soo saartay ee ah ‘Ha dooran dabargo’
"Ugu yaraan waxaan haysanay asteroid," dinosaurku wuu ka digay, isaga oo tixraacaya aragtida caanka ah ee sharraxaysa dabar-goynta dinosaurs 70 milyan oo sano ka hor. "Waa maxay cudurdaarkaaga?"
Filimkan oo ah kii ugu horeeyay ee abid lagu sameeyo gudaha Golaha Guud ee Qaramada Midoobay iyadoo la isticmaalayo sawiro kombuyuutar laga soo saaray (CGI) ayaa kasoo muuqday dad caan ah oo caan ka ah caalamka oo ku dhawaaqaya Dinosaur luqado badan, oo ay ku jiraan jilayaasha. Eiza Gonzalez (Isbaanish), Nikolaj Coster-Waldau (Danishka), iyo Aïssa Maiga (Faransiis).
Dinosaurku wuxuu sii wadaa inuu iftiimiyo sida taageerada maaliyadeed ee shidaalka fosil ee loo marayo kabitaannada - lacagta cashuur bixiyayaasha ee ka caawisa in qiimaha dhuxusha, saliidda iyo gaasta ay hooseyso macaamiisha - ay tahay caqli-xumo iyo caqli-darro marka loo eego cimilada isbeddelaysa.
"Ka fakar dhammaan waxyaabaha kale ee aad ku samayn karto lacagtaas. Dunida dacaladeeda dadku waxay ku nool yihiin saboolnimo. Miyaanad u malayn in caawinta iyaga ay macno badan samaynayso marka loo eego… bixinta kharshka dhimashadda noocyadaaga oo dhan? Dinosaur wuxuu leeyahay.
"Filimku waa mid xiiso leh oo soo jiidasho leh, laakiin arrimaha uu ka hadlayo ma noqon karaan kuwo ka sii daran," ayay tiri Ulrika Modéer, Madaxa Xafiiska UNDP ee Xiriirka Dibadda iyo Qareennada. "Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay waxa uu ku tilmaamay qalalaasaha cimilada mid 'cas u ah aadanaha.' Waxaan rabnaa filimku inuu maaweeliyo, laakiin waxaan sidoo kale rabnaa inaan kor u qaadno wacyiga sida xaaladdu u daran tahay. Caalamku waa in uu sare u qaadaa ficilka cimilada haddii aan doonayno in aan ku guulaysano ilaalinta meeraheena badbaadada jiilalka mustaqbalka."
Ololaha UNDP ee 'Ha dooran dabar go'' iyo filim ayaa ujeedadoodu tahay in ay iftiimiyaan kabka shidaalka fosil iyo sida ay u baabi'inayaan horumarka la taaban karo ee ku aaddan soo afjarida isbeddelka cimilada iyo in ay horseedaan sinnaan la'aanta iyaga oo ka faa'iideysanaya kuwa hodanka ah.
Cilmi-baadhis ay UNDP soo saartay oo qayb ka ah ololaha ayaa muujinaysa in dunidu ay ku bixiso US $423 bilyan sannadkii si ay uga kabto shidaalka laga soo saaro macaamiisha – saliid, koronto oo ay dhaliso gubista shidaalka kale ee shidaalka, gaaska, iyo dhuxusha.
Tani waxay dabooli kartaa kharashka tallaalka COVID-19 ee qof kasta oo adduunka ah, ama waxay bixin kartaa saddex jeer qaddarka sannadlaha ah ee loo baahan yahay si loo cirib tiro saboolnimada ba'an ee caalamiga ah.
Ololaha iyo filimku waxay rajeynayaan inay ka dhigaan arrimaha adag ee mararka qaarkood farsamo ee la xidhiidha Kabidda Shidaalka Fossil iyo xaaladda degdegga ah ee cimilada mid la heli karo. Iyada oo loo marayo ficillo kala duwan oo dadweynaha lagu martiqaado inay qaadaan, ujeedadu waa in labadaba wax la baro oo codka la siiyo dadka adduunka oo dhan.
Filimka 'Ha Dooran Dabar goynta' waxaa la sameeyay iyadoo lala kaashanayo Activista Los Angeles (waa hay'ad hal abuur leh oo abaal-marin badan ku guuleysata), David Litt (hadal-qoraha madaxweynaha Mareykanka Barack Obama) iyo Framestore (istuudiyihii hal-abuurka ka dambeeya James Bond, Ilaaliyeyaasha Galaxy, Avengers End Game). Wunderman Thompson waxa uu u dhisay hab deegaanka dhijitaalka ah hindisaha lagu xoojinayo dadka aduunka oo dhan si ay tallaabo u qaadaan halka Mindpool ay soo saartay qalab ka-qaybgal sirdoon oo wadajir ah oo loogu talagalay goobta ololaha.
PVBLIC Foundation, oo ah hay'ad aan faa'iido doon ahayn oo hal-abuur leh oo abaabusha warbaahinta, xogta, iyo tignoolajiyada horumar waara iyo saamaynta bulsho ee adduunka oo dhan, ayaa bixisa isgaarsiin istiraatiiji ah iyo taageero warbaahin. Astaanta agabka joogtada ah ee BOTTLETOP iyo dhaqdhaqaaqooda #WADAJIRTA ayaa sidoo kale iskaashi la samaynaya UNDP waxayna soo saari doonaan baayacmushtar gaar ah farshaxan reer Brazil Speto si uu uga faa'iidaysto ololaha.
Wax badan oo ku saabsan ololaha ka ogow www.dontchooseextinction.com